Noocyo kala duwan oo ah basbaas | December 2019
Ugu Weyn Ee Noocyo kala duwan oo ah basbaas
Basbaas macaan: sii kordhaya ee lagu koriyo ah
Sida loo koro basbaaska ee lagu koriyo ah? Su'aalahani waxay daneynayaan beeraley badan. Ka dib oo dhan, habka aqalka dhirta lagu koriyo ee dhaqanku wuxuu suurtageliyaa helitaanka goosashada bilowga marka la barbardhigo aag furan, iyo waliba marka loo eego, marka dalagga furan uu dhammaado. Si loo helo wax-soo-saarka wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka agrotechnical-ka ahna waxa ugu muhiimsan waa in tani ay noqoto rabitaanka xagaaaga xagaaga inuu sameeyo shaqada uu jecel yahay.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeray basbaas si geedo
Xaqiiqda ah in dayaxa wajigiisu uu saameyn ku yeelanayo nolosha adduunka oo dhan ayaa muddo dheer loo yaqaan. Isla taasi waxay sharraxaysaa caan-qabsiga dayax-gacmeedka ee bannaanka iyo beerta. Maanta waxaan ka hadli doonaa sida si habboon loo beeray basbaas geedo sida ku qoran jadwalka Dayaxa. Shuruudaha loogu talagalay basbaaska sii kordhaya Sameynta heerkulka lagama maarmaanka u ah horumarinta geedo bambo ah ee deegaan deegaan ah maaha mid u fudud sidii ay u muuqan lahayd jaleecada hore.
Noocyo noocyo basbaas Bogatyr sida loo daryeelo dhaqanka waddanka
Basbaas macaan leh waa khudradda, iyada oo aan lahayn marti-geliye makhaayad samayn karto. Waxaa jira noocyo kala duwan oo noocyo basbaas macaan, laakiin maanta waxaan fiirin doonaa kala duwan Bogatyr, sifooyinka, sharaxaad of sifooyinka, iyo waxaan baran doonaa waxa la sameeyo si ay u koraan beerta. Ma taqaanaa? "Bogatyr" wuxuu leeyahay bogsiin.
Talooyin ku saabsan beeritaanka iyo daryeelidda Gypsy F1 basbaas macaan
Waxaa laga yaabaa in aysan jiri doonin qorshe gaar ah kaas oo dhaqanka sida basbaas macaan oo aan la korin doonin. Hybrid Gipsey F1 Biber Biber waa mid aad u caan ah sababtoo ah caabbinta cudurada iyo soo bandhigid wanaagsan. Astaamaha kala duwan ee Gypsy F1 Xayawaanku waa mid yar (miisaanka 100-200 g), wuxuu ka mid yahay nooca Hungarian (conical), derbi culus.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo kala duwan oo ah basbaas 2019